Abanebhizinisi eliyivelakancane endlini emnyama bakholelwa ebhizinisini lomndeni. Baxoxe noZIMBILI MAZIBUKO - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Ibhizinisi lokubhonqa noma ukubhala izimpahla ngokotini iHlengokuhle Embroidery baliqala egaraji lakwabo ngo-2013. UMnu uSifiso Mhlongo nomkakhe uNkk uNomusa Mhlongo bangabanikazi baleli bhizinisi elingavamile ebantwini abamnyama.
Ngaphambi kokuzisebenza, uMhlongo ubesebenza enkampanini eyenza umsebenzi wokubhonqa nowezimpahla zokugqoka.
“Ngihambe kakhulu ngomsebenzi wokubhonqa lapho bengisebenza khona ngaphambilini. Ngize ngaya naphesheya kwezilwandle ngimatasa futhi ngihamba phambili kuwona enkampanini engabe ngikuyona.
“Kodwa kwafika kimina nomkami ukuthi siziqalele okungokwethu ngolwazi engase nginalo kanti nomkami ubenolwazi (lokuthuthukisa amakhono) abantu namabhizinisi amancane,” kusho uMhlongo.
Bathi eminyakeni eyisishiyagalombili iHlengokuhle Embroidery ikhona akubanga lula ukufinyelela kuleli zinga asebekulona manje. Ibhizinisi baliqale kwabo ngomsebenzi omncane wokubhala amathawula.
“Ngokuhamba kwesikhathi likhulile ibhizinisi kwafanele siphume sibheke indawo esizosebenzela kuyona ngoba ekhaya bekungasaphephile ukuletha khona amakhasimende ngoba ikhaya kumele kube (ngelethu) nabantwana, sizizwe siphephile uma sikulona,”kuchaza uNkk uMhlongo.
Le nkampani isisimeme emsebenzini wayo njengoba amanye amakhasimende ayo kuyizikole ezisuke zifuna umfaniswano wesikole onamagama abafundi , izinkampani ezinkulu zakuleli, amabandla noma ukwenza nokuhlobisa izimpahla zokulala zomakoti nezimpelesi zakhe.
“Kuningi esikwenzayo eHlengokuhle; yizikibha, ama-traicksuit, izigqoko, izikhafu kanti futhi siyambhalela umuntu ezimpahleni zokundlala umbhede uma efisa. Into nje esiziqhenya ngayo thina, yizinga eliphezulu lomsebenzi wethu nendlela esazisa ngayo amakhasimende ethu,” kuchaza uNkk uMhlongo.
Eminye yemisebenzi yokubhonqa yeHlengokuhle
Bathi bashayekile nabo ngenxa yeCOVID-19 ezweni. Bebenezisebenzi eziyisishiyagalolunye kodwa ngenxa yalolu bhubhane sebesele neziyisihlanu kuphela.
“Ngesikhathi kuvalwa izwe (sithintekile) ngoba bekunganyakazi lutho kodwa sakwazi ukubheka ukuthi bese kudingeka izifonyo, sabe sesizenza kodwa ezethu besizibhala igama lomuntu noma lenkampani ukuze ahluke, nokusize kakhulu ibhizinisi lethu,” kusho uMhlongo.
IHlengokuhle ibhonqela nezinkampani ezinkulu
I-COVID-19 bekungeyona inselelo yabo yokuqala. Nasekuqaleni kwebhizinisi bahlangabezanile nenkinga yokungabi khona kwemali yokuliqala. Loko kwaphoqa ukuthi basebenzise imali ababeyibekile, baboleka nasebhange.
“Enye inselelo esekhona namanje wukuthi abekho abantu abanolwazi lomsebenzi wokubhonqa, luyashoda ulwazi lwalo mkhakha (ebantwini). Loko kwenza ukuthi namanje le mboni iqhubeke igcwale ezinye izinhlanga,” kuchaza uNkk uMhlongo.
Ngenxa yaloku, iHlengokuhle isivule isikole sokufundisa ngalo msebenzi. “Bakhona abantu ababili esiye sabaqeqesha ngaphambilini. (Kumanje) sebenemishini yabo, bayazisebenza. Sesilinde ukuthi isikole sethu sigunyazwe bese kuphelela konke,” kwengeza uMhlongo.
Laba bashadikazi sebefundise nabantwana babo ababili umsebenzi. “IHlengokuhle eyethu siwumndeni, ngakho sonke kumele sazi ukuthi kwenzekani, sibambisane, sesekane ekukhuliseni ibhizinisi,” kusho uNkk uMhlongo.
Bathi okubaphumelelisayo ekusebenzeni ndawonye wukwazi ukuthi omunye nomunye yikuphi lapho emandla khona, ukuxoxa, ukuhloniphana nokuhlukanisa umsebenzi wasekhaya nebhizinisi.
Facebook: Hleng’Okuhle Embroidery & Digital Design